Heavens Door LLC LONESOME ELK CABIN - I-Airbnb
Heavens Door LLC LONESOME ELK CABIN
SICELA UQAPHELE: UMA unezithandani ezingu-2, KUZODINGEKA UKUTHI uqashe IZINDLU EZAKHIWE NGAMAPULANGWE ezingu-2! Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ethokomele enekhishi eliphelele elinezinto zikagesi ezigcwele, umshini wokwenza iqhwa, umpheme ongemuva onendawo yokuziphophophophotha, umgodi womlilo egcekeni elingemuva. Zonke izitsha nezinto zokupheka, izitsha, izitsha zesiliva, amathawula, amashidi anikeziwe, vele ulethe ukudla kwakho neziphuzo nezimpahla, amalahle esitofu sokugaya inyama. Amamayela ambalwa nje ukuya e-Buffalo River, nayo yonke imizila yokuqwala izintaba. Umzila wokuqwala izintaba wase-Sweden Creek ungamamayela angaba ngu-1 ukusuka emgwaqeni.
SICELA UQAPHELE: UMA unezithandani ezingu-2, KUZODINGEKA UKUTHI uqashe IZINDLU EZAKHIWE NGAMAPULANGWE ezingu-2! Sifuna ukuthi uzizwe ukhululekile phakathi nokuhlala kwakho. Indlu ngayinye eyakhiwe ngamapulangwe iklanyelwe ukulala umbhangqwana owodwa onezingane ezincane ezingu-2, noma abantu abadala abangu-3. Umbhede ekamelweni lokulala ulala abantu abadala abangu-2, futhi i-futon ingalala izingane ezingu-2, noma umuntu omdala ongu-1. I-futon akuyona eyabantu abadala abangu-2! Alikho igumbi lezindlwana noma omatilasi abaphekuzelayo. Uma ufika nabantu abengeziwe, uzokhokhiswa imali eyengeziwe umuntu ngamunye, ubusuku ngabunye. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ethokomele, enhle emahlathini, enamasevisi esimanje! Indawo ihlotshiswe ngobuciko bangempela nezithombe zomnikazi, zezilwane zasendle nezindawo ezinhle phezulu lapha. Indawo yokuhlala ene-futon yokulala ezinganeni ezingu-2, i-Smart tv ene-wifi/, isihlalo sokuhlala, ikhishi eligcwele elinamakhawunta e-granite, izinto zikagesi ezigcwele/i-icemaker, isitofu/uhhavini, i-microwave, wonke amasevisi owadingayo ukuze upheke, izitsha, amabhodwe/amapani, ibhodwe lekhofi/ikhofi, ukhilimu & ugologo ohlinzekwe, insipho yezitsha enikeziwe, kanye ne-Echo Show ukuze udlale umculo wakho noma ucele iresiphi noma isimo sezulu, izinkombandlela, noma yini ofuna ukuyibuza. Ikamelo lokulala linombhede omkhulu ontofontofo kakhulu, ukuma ebusuku, isiphephethamoya esisesilingini. Iminyango yenqolobane esilayidayo ihlukanisa indawo yokuhlala/ikamelo lokulala/ubhavu. Indlu yokugezela egcwele eneshawa ebanzi engu-4 ft. Wonke amashidi, izingubo zokulala, amathawula anikeziwe, ngisho nezinto zokugeza ebhavini. I-Deck inomjikelezo we-porch wokuphumula, indawo yangemuva yegceke inomgodi womlilo (letha izinkuni zakho), itafula lepikiniki, kanye ne-grill yamalahle (letha amalahle akho & ukushisa). Umdlalo we-Cornhole wokudlala ngaphandle, amaphazili, izincwadi, amakhadi ngaphakathi. Hambahamba endlini ukuze ubone ukushona kwelanga okumangalisayo, nezinkanyezi ezikhazimulayo! Uzoyithanda le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe! Izivakashi zangaphambilini zithe zifuna ukuhlala lapha!
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe epholile emahlathini, eseduze kakhulu ne-Sweden Creek Falls ne-Wilderness Buffalo Ranch, ukuze uqambe ambalwa ezindawo eziseduze. Indawo yethu ithi i-Kingston AR, noma kunjalo singamakhilomitha angu-6 enyakatho ye-Kingston, futhi ikheli lethu eliqondile ngeke lidonse phezulu ngoba yikheli elisha. Kuzodingeka ulandele iziqondiso ezinikeziwe ukuze ufike lapha! Kukhona i-cafe e-Kingston, nesitolo se-Kingston Station esisebenza ngama-burger amahle kakhulu namabhulakufesi nokunye, futhi ithengisa ubhiya, futhi iphethe ukudla okumbalwa. Kukhona nesitolo sokudla, ibhange, umtapo wolwazi, nesitolo sobuciko esithengisa ubuciko bendawo e-Kingston. Futhi unamamayela ambalwa nje ukuya e-Ponca, futhi kukhona isitolo esithengisa izinto zendawo/indawo yokuqashisa izikebhe lapho ebizwa ngokuthi yi-Living Valley Canoe, abantu abahle kakhulu, kanye ne-Buffalo Outdoor Center yetiye lezivakashi, njll, futhi banikeza ama-sandwiches amahle kakhulu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Kingston namaphethelo